जब दिदीबहिनी दाजुभाइ बनेर घर फर्किए... access_timeकात्तिक १०, २०७७
‘इस्लामादबाट केटा बनेर गुजरात पुगेको छु । यस कुराले मलाई यति धेरै खुसी छ, म बयान गर्न सक्दिनँ । मलाई सानैदेखि केटीको लुगा मनपर्दैन थियो । मेरो काम र बानी केटाजस्तै थियो । मेरा सात बहिनी दुई जना भाइ पाएर निकै खुसी छन् । मेरो भाइ मुराद पनि खुसी छ ।&rsquo...
इन्टरनेट कम्पनीका नाममा छोरी ‘न्वारन’, १८ वर्षसम्म निःशुल्क वाईफाई access_timeकात्तिक ६, २०७७
आफ्नी नवजात छोरीको नाम टीवाईफिया राख्ने एक स्विस जोडीलाई इन्टरनेट प्रदायक संस्था टीवाईफाईले १८ वर्षसम्मका लागि सित्तैमा वाईफाई उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि टीवाईफाईले फेसबुकमा विज्ञापन हाल्दै आफ्ना नवजात सन्तानको छोरा भए टीवाईफस र छोरी भए टीवाईफिया राख्न दम्पत्तीहरुलाई...
टाउको जोडिएका जुम्ल्याहा अपरेशनपछि घर फर्किए access_timeकात्तिक ४, २०७७
टाउको जोडिएर जन्मिएका जुम्ल्याहा बालिका, जसको गत वर्ष लण्डनस्थित ग्रेट ओरमोन्ड स्ट्रीट अस्पतालमा सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेर छुट्याइएको थियो, पाकिस्तानस्थित आफ्नो घर फर्किएका छन् । सफा र मर्वा बिबीको गत वर्ष तीनवटा अपरेशन गरिएको थियो । जसमा उनीहरुले अपरेशन थिएटरमा ५० घण्ट...
फेसबुकले प्याजलाई ‘सेक्सी’ ठानेपछि... access_timeअसोज २३, २०७७
क्यानडाको एक बिउ र बागबानीको सरसामान बेच्ने स्टोर त्यतिबेला चकित पर्यो जब उनीहरुले थाहा पाए कि फेसबुकले प्याजलाई ‘सेक्सी’को श्रेणीमा राख्ने गर्छ । क्यानडाको पूर्वमा रहेको प्रान्त न्यूफाउन्डल्याण्डको सेन्ट जोन्स शहरमा रहेको ‘ईडब्यू गेज’ नामको कम्पन...
९ कक्षासम्म पढेका किरपाल बने प्रोफेसर, लेखे ३३ पुस्तक access_timeअसोज २२, २०७७
प्रोफेसर किरपाल कजाक भारतमा मध्यमवर्गका कथाकार भनेर चिनिन्छन् । उनले २०१९ मा ‘साहित्य अकादमी अवार्ड’ जितेका थिए । तर, आफ्नो ज्ञान र अनुभवमार्फत धेरैलाई हौसला प्रदान गर्ने कजाकले ९ कक्षा पास गरेपछि औचापरिक शिक्षालाई निरन्तरता दिन पाएनन् । यसका बाबजुद आज उनी...
प्रयोग भइसकेको कण्डम बटुुलेर बिक्री गर्ने गिरोह पक्राउ access_timeअसोज ९, २०७७
संसारमा यस्ता मानिस धेरै छन्, जसले आफ्नो फाइदाका लागि अन्य व्यक्तिको ज्यान पनि दाउमा राखिदिन्छन् । दक्षिण पूर्वी एशियाली देश भियतनाममा यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ । यहाँ, प्रहरीले प्रयोगमा आइसकेका ३ लाख २५ हजार कण्डम बरामद गरेको छ । यी कन्डमलाई पानीमा धोएर नयाँ कण्डम...
६० वर्षका पूर्व कार्यकारी अधिकारीले पुशअप गरेर मागे जागिरः भने, ‘अहिले पनि फिट’ access_timeअसोज ६, २०७७
भनिन्छ उमेर एउटा अंक मात्रै हो, यदि तपाईंभित्र केही गर्ने उत्कट चाहना छ भने तपाईंले जुनसुकै उमेरमा जे पनि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तै ष्गरेका छन् स्कटल्याण्डमा जन्मिएका ६० वर्षका पाल मार्क्सले । लकडाउनका बेला मार्क्सको जागिर गुमेको थियो र बढ्दो उमेरसँगै उनले काम पनि...
पेरिसको सबैभन्दा अग्लो भवन चढ्दै गर्दा पक्राउ, पाँच वर्षअघि नेपालको झण्डा बोकेर चढेका थिए एक व्यक्ति access_timeअसोज ४, २०७७
उचाईसँग डर लाग्छ ? यदि लाग्छ भने तपाईंलाई यो भिडियो हेर्दा डर लाग्न सक्छ । किनभने एक व्यक्ति सुरक्षाको कुनै उपकरण बिना नै पेरिसको सबैभन्दा अग्लो भवन चढेका छन् । झट्ट हेर्दा यस्तो लाग्छ कि ती व्यक्तिले आफूले आफैंलाई ‘स्पाइडर म्यान’ नै ठानेका छन् । यद्यपि, ती व्यक्...
२२ हजार वर्ष पुरानो भालुको शव छालासहित भेटियो access_timeअसोज २, २०७७
आर्टिक सर्कलभन्दा धेरैमाथि दुर्गम साइबेरियन टापूहरु छन् । जहाँ, अस्थिपञ्जर व्यापारी र वैज्ञानिकहरु लोप भइसकेका प्राणीहरुको खोजीमा लागेका हुन्छन् । शताब्दीऔँ अघि लोप भएका यस्ता प्राणीका अस्थिपञ्चर त्यहाँ हिउँका कारण सुरक्षित हुन्छन् । ल्याकोभोस्की टापूमा अहिले वैज्ञानिहरुले...
२६ वर्षकी महिला एक्लैले बनाइन् आफ्नो घर access_timeअसोज २, २०७७
दक्षिण अफ्रिकाकी महिला इन्जिनियरले एक्लैले आफ्नो घर बनाएकी छिन् । प्रायः पुरुषको मात्रै बर्चस्व हुने यस्ता निर्माण कार्यमा उनको एक्लो सहभागितालाई धेरैले प्रेरणाको रुपमा लिएका छन् । उनको फोटो सोसल मिडियामा प्रकाशित भएपछि अत्यधिक चर्चितसमेत बनेको छ । गत महिना दक्षि...
तुुर्केमिनिस्तानका राष्ट्रपतिको अनेकौँ स्टन्ट access_timeभदौ २४, २०७७
तुर्केमिनिस्तानका राष्ट्रपति गुरवानगुली बर्डिमुहामेडोभ अनेक हर्कत गरेर चर्चामा आउँछन् । उनी नयाँ–नयाँ स्टन्टका सौखिन हुन् । यसपटक आफ्नो मनपर्ने सुुभ गाडीको छतमा बसेर उनले मिनिगन चलाएका छन् । यस बन्दूूकबाट उनले केही टाढा रहेको पिरामिड आकारको तेलको ड्रमलाई पड्का...
संसारको पहिलो संग्रहालय जहाँ पुराना सामान होइन खुसी पाइन्छ access_timeभदौ २२, २०७७
संग्रहालय एउटा यस्तो स्थान हो जहाँ इतिहास, संस्कृति, विज्ञानलाई सजाएर राख्ने गरिन्छ तर आज हामी भिन्न संग्रहालयको कुरा गर्दैछौं । एउटा यस्तो संग्रहालय जसको उद्देश्य मानिसहरुलाई खुसी बनाउनु हो । हुन त खुसी त्यस्तो चिज होइन, जुन संग्रहालयमा झुण्डिएको देखियोस् । तर पनि यहि उ...
एउटा भेडा ५ करोड ७३ लाख रुपैयाँमा बिक्रि access_timeभदौ २२, २०७७
‘डबल डाइमन्ड’ नाम दिइएको टेक्सेलको भेडा हालै संसारको सबैभन्दा महँगो भेडा बन्न सफल भएको छ । आनुवंशिक रुपमा उत्कृष्ट मानिएको यो भेडा स्कटमा आयोजित लिलामीमा ४ लाख ९० हजार डलर (५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) मा बिक्रि भएको छ । नेदरल्याण्डस्थित टेक्सल नामक...
८ हप्ताको शिशुले पितालाई भने – हेलोः सबैभन्दा कम उमेरमा बोल्ने बच्चा हुन् त ? access_timeभदौ १८, २०७७
८ हप्ताको शिशुले आफ्नो पितालाई हेलो भनेर सबैलाई अचम्मित पारिदिएका छन् । चार्ली नाम दिइएको उक्त बालक सबैभन्दा कम उमेरमा बोल्ने संसारको पहिलो बच्चाको रुपमा हेरिएको छ । बेलायतका निक र क्यारोलिन आफ्नो सन्तानको पहिलो बोली यति कम उमेरमा सुन्दा निकै उत्साहित भएका छन् । स...
बेलायती सैनिकको ज्यान बचाउने कुकुरलाई उच्च सम्मान access_timeभदौ १३, २०७७
बेलायतमा एक कुकुरलाई भिक्टोरिया क्रस सरहको उच्च सम्मान दिइने निर्णय भएको छ । अलकायदा विद्रोहीहरुसँग लडिरहेका बेलायती सैनिकलाई जोगाउने क्रममा यो कुकुर घाइते भएको थियो । २०१९ मा कम्पाउन्डमा भएको हमलाका दौरान यो कुकुरको पछाडिपट्टीका दुुबै खुुट्टामा गोली लागेक...
३ लाख ६७ हजार पाउण्डमा बिक्री भयो भेडा access_timeभदौ १३, २०७७
विश्वकै महँगो भेडाको मूल्य कति होला ? भर्खरै ३ लाख ६७ हजार ५ सय पाउन्डमा लिलामी भएको एक भेडालाई विश्वकै सबैभन्दा महंगो मानिएको छ । स्कटिस नेशनल टेक्सल प्रदर्शनीका क्रममा बिहीबार यो भेडा बिक्री भएको हो । तीनजना किसानहरुले मिलेर यो भेडा किनेका छन् । भेडा किन्ने...
एक पिता जसले छोरीका पूर्व प्रेमीसँग इन्गेजमेन्ट गरे, दुई महिनापछि छोरी जन्मँदै access_timeभदौ ९, २०७७
बेलायतमा एक समलिङ्गी पिताले छोरीका प्रेमीसँग इन्गेजमेन्ट गरेका छन् । पिता आफ्नी छोरी र उनका पूर्व प्रेमीसँग छुट्टी मनाउन गएका बेला उनले आफ्नी छोरीका पूर्व प्रेमीलाई प्रेम प्रस्ताव राखेका हुन् । डेली मेलका अनुसार ५० वर्षीय ब्यारी ड्रूइट ब्यारलो बेलायतका आधिकारिक रुपमा प...
गान्धीको चश्मा चार करोड सात लाखमा लिलामीः चश्माका मालिकले भनेका थिए, ‘मन नपरे फ्याँकिदिनु’ access_timeभदौ ७, २०७७
बेलायतमा महात्मा गान्धीको सुनको जलप लगाइएको चश्मा लिलामीमा २.६ लाख पाउन्ड (चार करोड सात लाख रुपैयाँ) मा बिक्रि भएको छ । शुक्रबार ईस्ट ब्रिस्टल अक्सन हाउसले इन्स्टाग्राममा चार हप्ताअघि आफ्नो लेटरबक्समा उक्त चश्मा भेटेको जानकारी दिएको छ । अक्सन हाउसले भनेको छ, ‘यसलाई...
हिउँमा १ वर्षसम्म फसेका १५ कुकुुर, जहाँबाट बाँचेर फर्किए २ दाजुभाई access_timeभदौ ५, २०७७
एजेन्सी । एकैछिनका लागि कल्पना गर्नुुस्, तपाई हिउँको संसारमा हुनुहुन्छ । गाँस, बास र कपासको अभाव छ । तपाईलाई सहयोग गर्ने कोही पनि छैन । दुई–चार दिन रमाइलै पनि होला, हप्ता वा त्यसभन्दा अगाडि जसोतसो टारिएला । तर, झन्डै एक वर्षसम्म यस्तो परिवेशमा बाँच्नु सायद असम्...
पोर्चुगलमा २ महिला सवार डुङ्गा डुब्यो, ७१ वर्षका राष्ट्रपति ज्यान बचाउन समुद्रमा हाम फाले access_timeभदौ ३, २०७७
पोर्चुगलका ७१ वर्षका राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डीले शनिबार अलगर्व बीचमा डुब्नै लागेका दुई महिलाको ज्यान बचाएका छन् । राष्ट्रपतिको यो साहसिक प्रयासको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ । दुई महिला सानो डुङ्गामा सवार थिए । यसैबीच उनीहरुको डुङ्गा पल्टियो । उनीहरु आफ्नो ज्यान बचाउनक...
भाले बासेर निन्द्रा खल्बलिएको भन्दै छिमेकीको उजुरी, मालिकमाथि २ सय डलर जरिवाना access_timeभदौ २, २०७७
बिहान ४ बजेर ३० मिनेटमा भाले बास्नु नौलो होइन । तर इटलीमा यसरी बिहानै भाले बासेपछि निन्द्रा खल्वलिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको छ । छिमेकीहरुल उजुरी गरेपछि भाले मालिकले बाध्य भएर २ सय डलर जरिवाना तिर्नुप-यो । ८३ वर्षीय एन्जेलो बोलेट्टी इटलीको लोम्बा...